Lixabiso CNC milling iindawo carbon intsimbi mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Isinyithi seCarbon sisinyithi sekhabhoni esinomxholo wekhabhoni oyi-0.0218% ukuya kwi-2.11%. Ikwabizwa ngokuba yintsimbi yekhabhoni. Ngokubanzi, ikwaqulathe inani elincinci lesilicon, i-manganese, isalfure, kunye ne-phosphorus.
Ngokubanzi, ukuphakama komxholo wekhabhoni yentsimbi yentsimbi, kokukhona ubukhulu kunye nobukhulu bokuqina kwamandla, kodwa isezantsi seplastikhi. I-Carbon steel CNC yokugaya inoluhlu olubanzi lwezicelo kwaye ifanelekile kwiindawo ezininzi zoomatshini. I-Ouzhan iya kulungisa ngokufanelekileyo iindawo zoomatshini ngokwemizobo yakho kunye neemfuno zakho. Indawo yokugaya iziko lokulungisa ilunge kakhulu ekusetyenzisweni kweentlobo zeendawo zokusebenza ezinje ngamalungu agobileyo kunye nezixhobo ezisebenzisa izixhobo. Iindawo ezigobileyo zisetyenziswa ngokubanzi kumacandelo emizi-mveliso, ezinje ngee-turbine blades, iinqanawa zokuhambisa iinqanawa, iimveliso zeshishini ezinendawo ezijikelezayo zokwenza izinto, njalo njalo. Ngokubanzi, umphezulu egobile kusingathwa wokugaya.
I-Carbon Steel i-CNC ye-Milling-Precision Carbon Steel Milling Parts Icandelo leziko
Izinto eziluncedo ze Ouzhan carbon steel iinxalenye ecoliweyo
-Ixabiso eliphantsi, kulula ukuyinyibilikisa
- Itekhnoloji yokulungisa elungileyo
Ukuphucula ukusebenza (C%, unyango lobushushu)
-Umjikelo wemveliso ekhawulezayo, ukuhanjiswa okukhawulezayo
Inkonzo yokugaya i-Carbon yentsimbi eyenziwe ngesinyithi-China Shanghai CNC carbon steel milling parts manufacturer
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabathengi, inokuqhubekisa ikhabhoni ngentsimbi ngokuzinzileyo nangokuthembekileyo kwiindawo eziphezulu ze-CNC zokugaya. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olufanelekileyo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kwezahlulo zomatshini wekhabhoni zentsimbi. Ukongeza, iimveliso zentsimbi ye-carbon ecoliweyo ibonelela ngokungqinelana nemigangatho esemgangathweni kwaye inokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngexabiso elikhuphisanayo ngeenkonzo zekhabhoni yentsimbi ye-CNC kwiimveliso zethu ezixabisekileyo.
Izahlulo zokugaya zentsimbi zecarbon zentsimbi
(1) Milling iinxalenye moya
Iimpawu zeenxalenye zeenqwelomoya zibonisiwe ekubeni umphezulu womatshini ungangqinelana nenqwelomoya ethe tyaba, ujonge kwindiza ethe tyaba, okanye kwi-engile esisigxina nenqwelomoya ethe tyaba; Uninzi lwamalungu alungiswa kumatshini wokugaya we-CNC ziinxalenye zeenqwelomoya, kwaye iinxalenye zeenqwelomoya zezona zilula uhlobo lwendawo ekusebenzeni kwe-CNC yokugaya ngokubanzi ifuna kuphela unxibelelwano lwee-axis ezimbini okanye unxibelelwano lwee-axis ezintathu zomatshini wokugaya we-CNC kusetyenzwe. Ngexesha lenkqubo machining, umphezulu machining ikukudibana komhlaba nesixhobo, kunye nokuphelisa amatye okusila okanye iinkabi zeempumlo zeenkomo zingasetyenziselwa ukurhabaxa nokugqiba machining.
(2) Milling iindawo umphezulu
Olona phawu lwendawo egobileyo kukuba indawo eyenziwe ngomatshini yindawo egobile. Ngexesha processing, indawo ngomshini kunye mgawuli mgawuli zisoloko kwindawo zoqhakamshelwano. Ukugqitywa komphezulu kwenziwa ikakhulu ngebhokisi lokusila yokuphela kwebhola.
Izinto eziluncedo ze Ouzhan carbon steel yokugaya inkonzo
-Zonke izinto ezichanekileyo ze-CNC ezisimbi zecarbon ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
-Ngokuya kwimizobo okanye iisampulu zokuvelisa ngokuchanekileyo izixhobo zentsimbi yekhabhoni.
Egqithileyo I-OEM yensimbi engenasici ye-CNC yezahlulo zomatshini zecandelo loomatshini
Okulandelayo: Umenzi waseTshayina u-CNC owenziwe ngesinyithi sentsimbi
I-OEM yesinyithi yokugaya intsimbi
Chinese umenzi CNC sentsimbi carbon sentsimbi mi ...